လူထုအသံ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label လူထုအသံ. Show all posts
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးမှုနှင့် ပြည်သူ့ အသံ
ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင် (အမရ ပူရ)
ကြားဖြတ် ရွေးကောက် ပွဲကို ဧပြီ ၁ ရက်က ကျင်းပ ခဲ့ရာ အာဏာရ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီက ၁၉ နေရာ အနက် ကိုးနေရာသာ အနိုင် ရရှိခဲ့သည်။
ယခု ရွေးကောက် ပွဲ၌ မဲပေး မှုနှုန်း အလွန် နည်းပါး ခဲ့ပြီး ရှမ်း၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင် စသည့် ပြည်နယ်များ တွင်မူ ဒေသခံ များ၏ စိတ်ဝင် တစား မဲပေးမှု ရှိခဲ့သည်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ မဲဆန္ဒရှင်များ၊ လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူများ၏ အသံကို စုစည်း ဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။
ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲက လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလို့ ထူးထူး ခြားခြား ဘာမှမရှိပါဘူး။ မဲပေးရတာ လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက မဲပေးဖို့ တန်းစီစောင့်နေရတယ်။ အခုတော့ မဲပေးချိန် သုံးမိနစ်ပဲကြာတယ်။ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ လည်း ပါတီကြီးငါးခုပြိုင်တယ်။ အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း အဲဒီပါတီကြီးငါးခုပဲ ပြိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရင်ထဲကရှိတဲ့ NLD ပါတီကိုပဲ မဲပေးခဲ့တယ်။ ပြောင်းလဲလက်စနဲ့ဆက်ပြီး ပြောင်းလဲသွား အောင် အဲ့ပါတီကိုမဲပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ တံတားအမည်ပေးတဲ့ ကိစ္စ ကြောင့် ဒီပါတီကို စိတ်ကွက်တာ မရှိပါဘူး။
ဦးအေးထွန်း (ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကညှော်ကျေးရွာ)
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကလိုပဲ မဲပေးရတာ လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ ဘာဖိအားမှ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ ပါတီကိုပဲ မဲပေးခဲ့တယ်။ ကျွန် တော်ကတော့ NLD ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအေးဝင်းကိုပဲ မဲပေးခဲ့တယ်။ ဦးအေးဝင်းလုပ်တာကိုင်တာကို သဘောကျလို့ သူ့ကိုပဲ မဲပေးချင်ခဲ့တယ်။ လမ်းခရီး၊ သွားလာရေး အခက်အခဲမရှိလို့ အစောကြီး မဲပေးခဲ့တယ်။ တံတားဘာအမည်ပဲ ပေးပေး မြန်မြန်သွားလို့ရဖို့ အရေး ကြီးတယ်။ တံတားနဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ခံစား ရတယ်။ ဒါကြောင့် NLD ပါတီကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
မထက်ထက်ရီနွေဦး (ပထမဆုံးမဲပေးသူ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်)
မိဘတွေက သမီးကြည့်၊ သမီးစိတ်ကြိုက်လုပ်ဆိုပြီးတော့ မဲရုံလိုက် ပို့ပေးတယ်။ မနှစ်တုန်းက အရမ်းပေးချင်တာ။ အသက်မပြည့်သေး တော့ မပေးလိုက်ရဘူး။ ပထမဆုံးအကြိမ် မဲလာပေးတာဆိုတော့ စိတ် လှုပ်ရှားတယ်။ လက်ရှိကတော့ ဘယ်ပါတီက ပြည်သူ့အတွက် ဘယ် လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲလေ။ ညီမကတော့ ပါတီတွေထဲ မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ပါတီကိုပဲ ရွေးချယ်ပြီးပေးခဲ့တာပေါ့နော်။ ညီမတို့ မြို့နယ်မှာ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ်လေ။ ကိုယ်မဲပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်က အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေကို လုပ်ပေးနိုင် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပညာရေးမှာလည်း ပိုအားစိုက်ပြီး လုပ်ပေး စေချင်တယ်။ မဲပေးရတာက လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲက တရားမျှတပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ မဲပေးရ တာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးလို့ရတယ်။ NLD ကို မဲပေးခဲ့တာပါ။ NLD အစိုးရ အများကြီးကောင်းပါတယ်။ အခုမှ တစ်နှစ်ပဲရှိသေးတာလေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ထက်တော့ အခုတစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အစိုးရက ပို ကောင်းပါတယ်။ နောင်ဒီထက် ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရင် သွေးလေးရဲ့ အနာဂတ်နောင်ရေးအတွက်ပေါ့။ NLD ကို မဲပေးခဲ့တာ ယုံကြည်တယ်။ ရှေ့လျှောက်လည်း NLD ကိုပဲ အားပေးမှာပါ။ ကလေး တွေရဲ့ အနာဂတ်ပညာရေး ပိုကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မမေသဇင်လှိုင် (အသက် (၁၈) နှစ်၊ ပထမဆုံးမဲပေးဖူးသူ)
ကိုယ်ပေးတဲ့မဲက နည်းနည်းမကောင်းမှာ စိုးတယ်။ ဘာမှလဲ မသိတော့ နည်းနည်းစိုးရိမ်တယ်။ မဲရုံတွင်း မဲပေးရတာ လွတ်လပ်မှုရှိပါ တယ်။ ပါတီကိုကြည့်ပြီး မဲပေးခဲ့တယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကို ပေးခဲ့ တယ်။ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို မမြင်ဖူးဘူး။ မဲဆွယ်ပွဲလည်း သွား မကြည့်ဖူးဘူး။ ပထမဆုံးမဲပေးရတာဆိုတော့ စိတ်က နည်းနည်းလေး ပျော်တယ်ပေါ့။
ဒေါ်ချစ်သန်း (ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကရင်ဝင်းစိန်ကျေးရွာ)
မဲပေးရတာ ဘာအခက်အခဲမှ မရှိပါဘူး။ ဖိအားပေးတဲ့ ပုံစံလည်း မရှိဘူး။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကလို လူမတိုးရတော့ အေးအေးဆေးဆေး မဲထည့်လို့ရတယ်။ ကျွန်မကတော့ NLD ကိုပဲ မဲပေးခဲ့တယ်။ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်လို့ NLD ကိုပဲ စိတ်အားထက်သန်တယ်။ ချောင်းဆုံတံတား နာ မည်ဘယ်လို ပြောင်းပြောင်း ကျွန်မတို့ သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ကျွန်မမဲပေးတာနဲ့ တံတားနာမည်ပြဿနာတက်နေတာ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ ကျွန်မလည်း တံတားနာမည် ကန့်ကွက်တဲ့ထဲမှာ မပါ လို့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပါတီကို မဲပေးခဲ့တယ်။
ဦးထွန်းကြည် (တပ်မတော်(လေ)အငြိမ်းစား၊ ဒဂုံအရှေ့ (၃) ရပ်ကွက်)
အဘက ၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကစလို့ အမြဲတမ်းပဲ မဲထည့်ခဲ့ပါ တယ်။ နိုင်ငံသားတာဝန်ကျေအောင်ပါ။ ထည့်တာတော့ ပြည်သူ့ပါတီကို ပဲ နှစ်တိုင်းမဲထည့်တာပါ။ မနှစ်ကထက် အဆင်ပြေတာက လူချောင်သွား တယ်။ အေးဆေးပါပဲ။ အိမ်ကလူတွေလည်း ထည့်ခိုင်းထားတယ်။ အသက်ရှိသေးရင် နောက်သက်တမ်းအတွက်လည်း မဲထည့်ဦးမှာပါ။ အဘအသက် (၈၁) နှစ်ရှိပါပြီ။ တပ်မတော်(လေ)က အငြိမ်းစားပါ။ လူ ငယ်တွေလည်း ဆန္ဒမဲကို လေးလေးစားစား သဘောထားစေချင်ပါတယ်။
ဦးစန်းမောင် (အသက် (၇၀) နှစ်၊ လယ်ဇင်စံပြရွာ၊ မုံရွာမြို့နယ်)
မဲပေးရတာ လွတ်လပ်မှုရှိပါတယ်။ မဲကတော့ တစညပေး လိုက်တယ်။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆောင်ပုဒ်လေးအတိုင်း ထည့်လိုက်တာပါပဲ။ အခုရွေးကောက်ပွဲက လွတ်လပ်မှုရှိပါတယ်။ မည်သူ့မည်သူမှ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတို့ ဘာတို့မရှိပါဘူး။ မိမိတို့လွတ်လပ် စွာ ဆန္ဒမဲလာပေးကြတာပါပဲ။ အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကလည်း မဲပေးဖူးပါတယ်။ အရင်အခေါက်တွေတုန်းကတော့ တန်းစီတိုးရတယ်။ အခုအခေါက်ကတော့ လွတ်လပ်တယ်။ မဲရုံလာရတာကလည်း လွယ် ကူပါတယ်။ အားလုံးပဲ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ မဲပေးကြတာပါ။ ၂၀၁၅ တုန်းကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မဲပေးခဲ့တာပါ။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ။ ပါတီတွေက တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေ တော့ တိုင်းပြည်အတွက် ဒေါ်စုကပေးလိုက်တယ်။ အခုတော့ တစညကို ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆိုတော့ ၂၁ ရာစုရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကြီးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ထည့်လိုက်တာပါ။ တို့တိုင်းပြည်က အားလုံးချမ်းသာသွားလို့ရှိရင် လူတွေမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို လျှောက်လှမ်းလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးမဲရုံမဖွင့်ခင်ကတည်းက စောင့်နေတာပါ။ ကျွန်မတို့ရပ် ကွက်က မဲရုံနည်းတော့ လူတွေတိုးကြိတ်နေမှာစိုးလို့ပါ။ ပထမက ရွေး ကောက်ပွဲရှိမှန်းမသိဘူး။ သိပ်လည်းနားမလည်ဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲ ကြေ ညာတာရှိလို့ သိရတာ။ ဘာတွေ ရွေးတယ်တော့ မသိဘူး။ ကိုယ်သဘော ကျတဲ့ပါတီကိုပဲ ထည့်လိုက်တာ ရပ်ရွာအကျိုးပြုနိုင်မယ်ထင်တယ်လေ။ သိပ်နားမလည်ပေမယ့် ကိုယ်ချစ်တဲ့ပါတီကိုပဲ မဲကတော့ မပျက်မကွက် ကိုပေးမှာပါ။
ဦးထွန်းသိန်း (အမ်းမြို့၊ လေယာဉ်ကွင်းရပ်ကွက်)
မဲပေးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ ဒီတစ်ခါက လူပိုရှင်းတာပေါ့။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ဒေါက်တာအေးမောင်ကို မဲ ပေးခဲ့တယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားထဲမှာ လွှတ်တော်ကို သွားနိုင်တာ သူတစ် ယောက်ပဲရှိတာလေ။ အဲဒါကြောင့် သူ့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ သူ့အ နေနဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေကို အဓိကထားလုပ်စေချင်တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို အကြံပြုစရာ မရှိပါဘူး။
ကျွန်မက ချင်းဖြစ်လို့ ချင်းပါတီပဲ (CNDP) မဲပေးခဲ့တယ်။ မဲပေးရ တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီးလည်း မစောင့်ရဘူး။ လွတ် လွတ်လပ်လပ် မဲပေးခဲ့ရတယ်။
ဦးငွေသောင်း (လယ်ဇင်ရွာ မုံရွာမြို့နယ်၊ရွေးကောက်ပွဲ လေးကြိမ်မဲပေး ထားသူ)
မဲပေးရတာ လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ NLD ကို မဲပေးခဲ့တယ်။ စစ် အစိုးရလက်ထက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆုတ်ယုတ်ခဲ့တယ်။ နောက်အစိုးရ လက်ထက်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အညီဆောင်ရွက်ရင် တိုးတက်လေမလား လို့ မဲထည့်ခဲ့တာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲက လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုရှိမယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ အရင် ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း NLD ကိုပဲ မဲပေးခဲ့ပါ တယ်။ မဲရုံသွားဖို့ အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ သွားလာရေးအဆင်ပြေပါတယ်။
အသက် (၈၀) ကျော်ရှိပြီ။ ဟိုးအရင်ကတည်းက မဲပေးခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်တာ သူပဲရှိလို့ ပေးခဲ့တာ။ အခု လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးခဲ့ရတယ်။ ထွေထွေ ထူးထူး ဘာမှမရှိဘူး။
ဦးဘအေး (အသက် (၉၁) နှစ်၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း၊ ညီလာခံကိုယ်စား လှယ်ဟောင်း)
ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့တာဝန်ကျေပွန်အောင် မဲလာပေးတာဖြစ်ပါ တယ်။ ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မဲရုံကို လမ်း လျှောက်လာပြီး မဲလာပေးတာပါ။ အရင်လည်း မဲတွေပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ တရားမျှတပါတယ်။ အကူအညီပေးကြပါတယ်။
မဲပေးချင်လို့ မနက်အစောကြီးကတည်းက ထလာတာ။ ကြံ့ခိုင်ရေး ကိုပဲ မဲပေးခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့် သူကို မဲပေးခဲ့တာ။ အခုမဲပေးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘယ်ပါတီကို ပေးရမယ်လို့လည်း မပြောဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပါတီကို ပေးခဲ့ရပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိပါတယ်။
မတင်နီလာဝင်း (ကြည့်မြင်တိုင် မျက်မမြင်ကျောင်း)
အသက် (၁၉) နှစ်ပါ။ တစ်ခါမှ မဲမပေးဖူးတော့ နည်းနည်းတော့ ကြောက်တာပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး ဒီက ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလည်း ကူညီပေးတော့ အခက်အခဲမရှိ မဲပေးနိုင်ပါ တယ်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မဲပေးရတာပျော်တယ်။ ကြိုတင်မဲလည်း မပေးချင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်၊ နောင်ကြုံလာရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပဲ မဲပေး ချင်တယ်။ နိုင်ငံရေးအကြောင်းတော့ နားမလည်ဘူး။ ကိုယ်နားထောင် လာတဲ့ သတင်းတွေအရ၊ လေ့လာချက်တွေအရ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပါတီ ကို မဲပေးခဲ့တာ။ မွန်ပြည်နယ်ဇာတိပါ။ ဒီကျောင်းကို ရောက်တာ ၁၁ နှစ်ရှိပါပြီ။
ဦးလှစိုး (Admin Manager၊ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမဲဆန္ဒနယ်)
အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲက လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကတော့ လူတွေတော်တော် စိတ်ပါဝင်စားခဲ့ပြီး မဲပေးခဲ့ကြတယ်။ အခုကြားဖြတ်မှာကျတော့ လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းတာတွေ့ရတယ်။ အရင်တစ်ခေါက်ကထက် မဲ လာပေးတဲ့သူ နည်းတယ်။ ဒီကြားဖြတ်က ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အားစမ်းကြည့်တဲ့အရာလို့ မြင်ပါတယ်။ ပြည်သူရဲ့ရပ်တည်ချက်က တစ် နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အစိုးရအပေါ်မှာ ထားတဲ့ သဘောထားရယ်၊ တခြားပါတီ တွေအပေါ်မှာထားတဲ့ သဘောထားရယ် အားစမ်းကြည့်တဲ့ပွဲပေါ့။ ၈၈ ကတည်းက NLD ကိုအားပေးခဲ့တာပါ။ NLDကိုပဲ မဲပေးခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလို့ ဘယ်ပါတီကိုမဲပေးခဲ့တယ်ဆို တာ မပြောရဲဘူး။ အခုတော့ ပြောရဲတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက် အများကြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။ အသက် တွေရင်းခဲ့ရတယ်။ အခုလို လွတ်လပ်စွာမဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အကျိုးဆက်ရလဒ်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ရတဲ့အခွင့်အရေးကို မဲမပေးတဲ့လူတွေအတွက် အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်။
မိသားစု သုံးယောက်မဲလာပေးကြတာပါ။ သားကြီးကတော့ နိုင်ငံ ခြားရောက်နေလို့ မပေးလိုက်ရဘူး။ သမီးရယ်၊ အမျိုးသမီးရယ်ပါ။ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အရင် မဲပေးတာနဲ့ဆိုရင်တော့ လူကလည်း နည်းတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိတ်ကြိုက်မဲပေးလို့ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာ နှစ်ကြိမ်မဲပေး ခဲ့ဖူးတယ်။ ၂၀၁၅ ရယ်၊ ၂၀၁၇ ရယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အခုကတော့ လူအရည်အချင်းကို ကြည့်လိုက်တယ်။ အရင်တုန်းကလို လူမကြည့်ဘဲ ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ၂၀၁၅ တုန်းကတော့ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆို တာနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အပြောင်းအလဲကိုကြိုက်တော့ အား လုံးပေးလိုက်တာပေါ့။ ဒီနှစ်ကျတော့ အရည်အချင်းလည်း ယှဉ်ကြည့် တာပေါ့။
အသက် (၉၂) နှစ်ရှိပြီ။ မဲရုံလုပ်တိုင်း ပေးခဲ့တယ်။ အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားကို အလွတ်မပေးတော့ဘူး။ မဲပေးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ မဲတစ်ပြားက ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ သိရမယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်မလုပ်ရင် ဘယ်သူလုပ် မှာလဲ။ နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်မယ့်သူကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဒါမှ ကိုယ့်တိုင်းပြည် တိုးတက်မှာပေါ့။ အရင်မဲပေးခဲ့တဲ့ လူတွေလည်း အနိုင်ရတာများတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း ရတယ်။ ခုနပြောတာ ကြား တယ်။ ရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးပဲ မဲလာပေးတယ်တဲ့။ အဘွားတောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ထည့်ဖို့ကောင်းတယ်၊ လုပ်သင့်တယ်။ မဲ ထည့်တာ ဘာမှ ကြာတာမှ မဟုတ်တာ။
ကိုစိုင်းရဲကျော်စွာမြင့် ( PACE အဖွဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ)
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရတဲ့အပေါ် မြင်တွေ့ရတဲ့ အားနည်းချက် တွေက ပြည်သူလူထု စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့သတင်းအချက်အလက်ရောက်ရှိ မှု နည်းတာတွေ့ရတယ်။ အားသာချက်က အရင်ကထက်စာရင် ရွေး ကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေက ပိုပြီးပွင့်လင်းလာတယ်။ ပိုကောင်းလာတယ်။ အဓိကအကြုံပြုချင်တာက ကော်မရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကို ကော်မ ရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေ သိရှိမှု၊ နားလည်မှု၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတွေက ၂၀၁၅ ထက်စာရင် ပိုများလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ နည်းစနစ်တွေကို အခုထက်ပိုပြီး ရှင်းလင်းလွယ် ကူအောင် လုပ်ရမယ်။ သင်တန်းတွေပေးတဲ့အခါ အချိန်ယူပြီး ပေးရ မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးမှု Voter Turnout နည်းသွားတာက သတင်းအချက်အလက်ရောက်ရှိမှုနည်းတာရယ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီလှုပ်ရှားမှုတွေ အရမ်းနည်းသွားတာကြောင့် ပြည်သူ လူထုစိတ်ဝင်စားမှု နည်းသွားတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက် ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူလူထုပါဝင်မှုက အရေးကြီးတယ်။ ပြည်သူတွေပါဝင်မှုမြင့်အောင်လုပ်ရမယ်။ ပါတီတွေ အနေနဲ့ရော၊ ကော်မရှင်အနေနဲ့ရော မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ ပိုပြီးလုပ်ရမယ်။ နည်းစနစ်သစ်တွေကို ရှာပြီး လုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/93339
ကဏ္ဍ ပြည်တွင်းသတင်း, လူထုအသံ
ပြည်တွင်းစစ်တွေရပ်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်လဲ အစိုးရကို ဘာတွေ အကြံပေးချင်လဲ
မန်းငြိမ်းမောင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းရုံး (KNU) ဗဟို ကော်မတီဝင်
အစိုးရတင် မဟုတ်ဘူး။ အကုန်လုံးကို အကြံပေးမှာ။ ကရင်ဖော်မြူလာကို ကြည့်လို့ ကျွန်တော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်တဲ့ အခါကြတော့ တစ်လျှောက်လုံး ရန်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ရန်သူတွေပဲ။
ဒါပေမယ့် ရန်သူနဲ့ တွေ့မယ်ကြတော့ ကျွန်တော်တို့က အရင်းအနှီး မရှိဘူး။ ရိုးသားမှုနဲ့ သစ္စာရှိမှု အခြေခံ ပြီးတော့မှ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တာ ကြတော့ ဒီအဆင့်ထိ ရောက်လာတာပါ။
ပြည်တွင်းစစ် တကယ်ရပ်ချင်ရင် ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကို ထောက်ထားပါ။ အရိုးခံ စေတနာနဲ့တွေ့ပါ။ စစ်မြေပြင်မှာ ကရင်တွေရှိတာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်သွားပြီ။ ဘာမှ အဖြေ မရဘူး ။ ကျိုးကြေတာပဲ အဖက်တင်တယ်။
စားပွဲဝိုင်းမှာပဲ အဖြေရှိတယ်။ ဒီနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးက စားပွဲဝိုင်းမှာပဲ ရှိတယ် စားပွဲဝိုင်းကို တက်လာခဲ့ပါ။ မကျေနပ်ရင်လည်း စားပွဲဝိုင်းမှာပဲ စာရင်းရှင်းလို့ရတယ်။
စားပွဲဝိုင်းမှာရှင်းတာက အလွန်ဆုံး ဖန်ခွက်နဲ့ပေါက်တာပဲ ရှိမယ်။ စစ်မြေပြင်မှာဆိုရင် ဒုံး၊ ဒိုင်းနဲ့ပြီးသွားပြီ ။ ဟုတ်တယ်မှတ်လား။ အဖြေကတော့ စားပွဲဝိုင်းမှာပဲရှိတယ် ။
ပြည်တွင်းစစ် တကယ်ရပ်ချင်ရင် စားပွဲဝိုင်းကိုတက်လာခဲ့ပါ ။ အပြစ်လျှောက်ပြောနေရင် ၇ရက် ၇လီတောင် ပြောလို့မဆုံး။ ပြည်တွင်းစစ်တကယ်ရပ်ချင်ရင် ရိုးသားမှုနဲ့ သစ္စာရှိမှုကို အခြေခံပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကရင်တွေ ဒါပဲလုပ်ခဲ့တယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီအဆင့်ထိ ရောက်လာတယ်။
နန်းခင်ထွေးမြင့် ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်
ငြိမ်းချမ်းရေး အောင်မြင်အောင် ဆိုရင် ကျွန်မတို့က နံပါတ် ၁ အချက်က စည်းကမ်း ရှိရမယ် ။ နံပါတ် ၂ ကတော့ ကျွန်မတို့ ညီညွှတ်မှုကို ထိန်းသိမ်း ထားရမယ် ။ ကျွန်မတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆက်ပြီး ကြိုးစား ရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းမှုက အပြည့်အ၀ ရမှာပါ။
စပြီးထူထောင်ပြီဆိုတော့ သေးသေးလေးက စတာပါ။ ကျွန်မတို့ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် လူမျိုးစုကနေ စတာပါ ။ နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျယ်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ ဒါက ငြိမ်းချမ်းရေးကလည်း ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဦးနိုင်ငံလင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်
စစ်ကတော့ ထိတွေ့မှုဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကတော့ တကယ်တော့ မယုံကြည်မှုက ဖြစ်တာပေါ့။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ တာလည်း နှစ်ပေါင်း များစွာဖြစ်ခဲ့ပြီ။ အဲ့လိုဖြစ်နေ လို့လည်း တွေ့ဆုံ မှုတွေ အကြိမ်ကြိမ် တွေ့နေ၊ တွေ့ဖို့လုပ်နေရတာပေါ့နော်။
နောက်ပြီးတော့ အရင်တုန်းကမရခဲ့တဲ့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပေါ့ ။အခုရဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေလိုအပ်တဲ့၊ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုချင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို ရအောင်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ဒါကိုရမယ်ဆိုရင် ဒါနဲ့အလဲအလှယ်လုပ်ရမှာပေါ့။
အဲ့တော့ ဒါရမယ် ကျိန်းသေတယ်ဆိုရင်တော့ ရပ်ဖို့ စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ရပ်ဖို့ အားလုံးကြိုးစားကြရမှာပေါ့ ။ ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။
ကိုမင်းအောင် ကရင်ပြည်နယ် ပအို့ဝ်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
ပြည်တွင်းစစ်တွေ ရပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ဆွေးနွေးပွဲမျိုးပေါ့ ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အချင်းချင်း ဆွေးနွေးတာရှိမယ် ။ လွှတ်တော်ရှိမယ် ။ သူတို့ သုံးဦးဖလှယ်ကနေပြီးတော့ များများတွေ့ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးတစ်ခု ညှိနှိုင်းရမှာပေါ့ ။
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားဆိုတာ အားလုံးက တိုင်းရင်းသားတွေချည်းပဲပေါ့ ။ ညှိနှိုင်းယူတဲ့နည်းစနစ်မျိုးသွားရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်။
ဒီကနေ့ ထိုးစစ်တွေရပ်ပါဆိုတာကလည်း တစ်ဖက်မှာကြည့်ရင် အစိုးရတပ်အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကို လာထိပါးတယ်လို့ ယူဆတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်း ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ဒေသကို လာရောက်ထိပါးတဲ့ ထိပါးစော်ကားတယ်လို့မြင်တယ်။
တကယ်တန်းတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက ညှိနှိုင်းပြီး သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ဘယ်နေရာမှာ၊ဘယ်လို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနဲ့ သွားရင်ကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်
အရင်းမြစ်ကို စဉ်းစားရမယ် ပြသာနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းချင်ရင် သူရဲ့အရင်းမြစ်ကို သိဖို့လိုတယ်။ ပြဿနာရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို စဉ်းစားရင်ဘာလဲဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သံသယတွေ ရှိခဲ့တာ၊ တစ်ယာက်နဲ့ တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုတွေ လျော့ခဲ့တာ၊ ဒါတွေအားလုံးကို ပြန်ပြီးတည်ဆောက်မှရမယ်။
နှစ်တွေအကြာကြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်၊ သူ့အမြင်၊ကိုယ့်အမြင် ဖလှယ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေထားမရှိခဲ့ဘူး။ အဲ့တော့ သူ့အမြင်၊ ကိုယ့်အမြင်ကို အခုလို ဆွေးနွေး ပွဲနဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်အစား အကြမ်းဖက်ပြီး ဖြေရှင်းတဲ့အကျင့်ဟာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ရှိခဲ့တဲ့ အခါကြတော့ အခုလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သူပြောရင် သူပြောတဲ့ ဟာကို သည်းခံပြီး နားထောင်ပေးနိုင်တဲ့ စိတ် မွေးဖို့က အဓိကပဲ။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်မှန်သလို သူ့ဘက်ကကြည့်ရင်လည်း အခြေနေကတစ်ခုလေ ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီနေ့ အစိုးရသစ် အနေအထားကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုရှိအောင် တည်ဆောက်ရမှာပေါ့။။ နားလည်မှုရှိအောင် တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ နားထောင်ဖို့လိုတယ်။
သူပြောတာနားထောင်၊ သူကကလည်း ကိုယ်ပြောတာနားထောင်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုတိုးလာမှာပေါ့။ အခြေခံက ဒါပဲ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်မြင်သာသာ ရှိလာရင် ဒီကိစ္စတွေကဖြေရှင်းဖို့ ရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ကြည့်ရင်လည်း ဒီလိုပဲ ဖြေရှင်းခဲ့တာပဲ။
ယုံကြည်မှု၊ နားလည်မှုကို အခြေခံပြီး ဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခုက ခွင့်လွတ်ခြင်းပေါ့။ ပြီးခဲ့တာက ပြီးခဲ့ပြီ။ ဒါတွေကို ပြန်ကြည့်နေလို့ ဘယ်တော့မှ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။
အရေးကြီးတာက ရှေ့ဘာလုပ်မလဲ။ လူငယ်တွေအတွက် ဘာလုပ်ဖို့၊ လုပ်ပေးလို့ရမလဲ။ အဲ့လိုပဲ လူငယ်တွေကလည်း ဒီငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်ဖို့လိုတယ်။ ဒါပါပဲ။
From : မဇ္ဈိမ မီဒီယာ By: စိုးသူအောင်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, January 20, 2017 No comments:
အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်တဲ့ knu တို့ရဲ့ အမြင်နဲ့ သဘောထား
ဗမာကို မုန်းတယ် မုန်းတယ်နဲ့ မုန်းတီးရေးတွေ ပြောနေ ကြတယ်၊ အဲလို မုန်းတီးနေလို့ တိုင်းပြည် တိုးတက် သွားမှာလား လူမျိုး ကောင်းစား သွားမှာလား မေးကြည့် ပါရစေ။
အဲလိုသာ မုန်းတီးရေး ဆိုရင် ဗမာ မြင်တိုင်း ငါလိုက်သတ် နေရတော့ မှာလား !
သေသေချာချာ စဉ်းစားကြပါ၊ အမုန်း ပွားနေရင် ဘာမှ ဖြစ်လာကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပဲ ငါ့လူမျိုး ငါ့ပြည်နယ် တိုးတက်မှု မရှိပဲ ဆင်းရဲတွင်း ထဲကို နစ်နေမှာပေါ့။
အနော့် ဘဝကို ပြောပြမယ် ...
အနော့် ဦးလေး KNU စစ်ကြောင်းမှူး တာဝန်ကို ယူတယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဆိုပြီး လက်နက် ဆွဲကိုင် တော်လှန်ခဲ့တယ်။
သံတောင်ကြီး ဂွင်မှာ ကျဆုံးခဲ့တယ်။
အနော့် အကို လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဦးလေးဖြစ်သူ ဗမာ စစ်တပ်ကြောင့် သေရတာ ဆိုပြီး KNU ထဲ ဝင်သွားခဲ့တယ်၊ သိပ်မကြာပါဘူး မဲသဝေါ မှာ ကျဆုံး ပြန်တယ်။
အခု နောက်ဆုံး အနော်လည်း စိတ်နာပြီး KNU ထဲ ဝင်ခဲ့တယ်၊ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ပြည်နယ် အတွက် ဆိုပြီး လက်ထဲမှာ သေနတ်ကို ဘယ်တော့မှ မချတမ်း ကိုင်ထားတယ် အခု အချိန်ထိပေါ့။
အနော် ဝင်သွား ကတည်းက တောထဲမှာပဲ နေရတယ် အစား ဆင်းရဲ အနေ ဆင်းရဲ ရွာတောင် ပြန်လို့ မရဘူး ဘယ်လောက် ဆိုးတဲ့ အဖြစ်လဲ အမြဲ စဉ်းစားတယ် ပုခက် မှာအိပ်ပြီး ငါတို့ ဒီလိုသာ ဆက်လုပ်နေရင် ပိုဆိုးဖို့ပဲ ရှိတော့မယ်၊ ငါ့လူမျိုး မကောင်းစားဘူး ငါ့ ပြည်နယ် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိဘူး ရှေ့က ငါတို့ ခေါင်းဆောင် တွေလည်း
နောက်ဆုံး ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ တိုင်ပင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ယူခဲ့ကြတာပဲ။
ထော့ကော်ကိုး အဖူး ထိန်မောင်တို့ စတယ် အလားအလာ ကောင်းတယ်။
နောက်တခါ အနော် တို့ KNU အဖူး မူတူးစေးဖော လုပ်တယ် အားလုံး အောင်မြင် သွားတယ်။
အခုဆိုရင် အနော် မြို့ပေါ်မှာလည်း လွတ်လွတ် လပ်လပ် သွားလို့ ရတယ် အမိုး အပါး တို့နဲ့လည်း အတူနေ ရတယ် ကရင်ပြည်နယ် တိုးတက်ဖို့နဲ့ ကရင်လူမျိုး
ကောင်းစားရေး အတွက်လည်း လုပ်လို့ရတယ်။
မှန်တယ် ဒါအမှန်ဆုံးပဲ ငါ တို့ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့လမ်း နောင် တက်လာမယ့် လူငယ် တွေ ပညာတတ်တွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။
ဘောပင်ပဲ ကိုင်စေချင်တယ် သေနတ် ကိုင်ပြီး စစ်သွေးကြွတွေ အဖြစ် မရှိစေ ရတော့ဘူး။
ဒါ အနော် တို့ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။
# Saw Mikel David..credit..
From : ဘာမ ထီ
Originally published at - https://www.facebook.com/profile.php?id=100013570981498&hc_ref=NEWSFEED
ကဏ္ဍ လူထုအသံ, ဆောင်းပါး
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု သက်တမ်း အခုဆိုရင် ၆ လပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်သား စစ်စစ် အစိုးရရဲ့ ၆ လတာ ဆောင်ရွက် ချက်တွေ အပေါ်မှာတော့ အားရ သူတွေ ရှိသလို၊ အားမရ သူတွေလည်း ရှိနေ ကြပါတယ်။
အပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မမြင့်မြင့်ခိုင် ရန်ကုန်မြို့ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တခဲနက် အနိုင်ရပြီး တက်လာတဲ့ NLD အစိုးရ ၆ လတာ အုပ်ချုပ်မှု အပေါ် ကျေနပ်သူတွေ ရှိသလို၊ သိသိ သာသာ ပြောင်းလဲတာ မတွေ့ရဘူး ဆိုပြီး ပြောတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အစိုးရသစ်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ လတ်တလောမှာ အခြေခံ လူတန်းစားတွေ သိသိ သာသာ အကျိုး ခံစားရတဲ့ အခြေ အနေမျိုး မရှိသေးပေမဲ့ မျှော်လင့် စရာတွေတော့ တွေ့နေ ရပြီလို့ အနှေးယာဉ်မောင်း ဦးစိန်သန်း က ပြောပါတယ်။
အစိုးရသစ် တက်လာတာ ၆ လသာ ရှိသေးတဲ့ အတွက်လည်း ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ ချီ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အကျပ် အတည်းတွေ ချက်ခြင်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ဘူး လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
“ဦးလေး တယောက်တည်း အမြင်က အားရရဲ့လား ဆိုတာက ဦးလေးတို့ အောက်ခြေ အဆင့် အထိတော့ မရောက်သေး ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လို့ ခုနပြော သလိုပြော နေရာတိုင်းမှာ နေရာ တိုင်းမှာ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာတွေ ပေါ်လာပြီဆိုတော့ ဦးလေးကလည်း အငြိမ်းစား တယောက်လေ ဒါလေးတွေတော့
နောက်ပြီး ဟိုတုန်းကနဲ့ မတူတော့ဘူးပေါ့။ ဟိုတုန်းကဆိုရင် ဦးလေးတို့မှာ မြေ၀ယ်ဖို့၊ ခြံဝယ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ အဆင် မပြေနိုင်ဘူး။ အခုလို တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာတွေ ပေါ်လာတော့ ဦးလေးတို့ အတွက်လည်း တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ ရနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ချမ်းသာမှု ရှိတာပေါ့လေ။”
NLD အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ နိုင်ငံရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး စတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဦးစားပေး ဖြေရှင်းနေတာ တွေ့ရပေမဲ့၊ စီးပွားရေး ကဏ္ဍမှာတော့ သိသာတဲ့ တိုးတက်မှု မတွေ့ရ ဘူးလို့ ယူဆ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အစိုးရသက်တမ်း ၆ လပြည့်မယ့် အချိန်မှာပဲ၊ ပြည်တွင်းမှာ ရွှေဈေးနဲ့ ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေ အဆမတန် တက်လာနေတဲ့ အတွက်လည်း ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ် သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ထီလက်မှတ်ရောင်းနေတဲ့ မခင်သန်းဌေး ကတော့ လူထုကြားမှာ စားဝတ်နေရေး ပြဿနာဟာ ကြီးသထက် ကြီးလာနေ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အဓိကတော့ ပြည်သူတွေမှာ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းတယ်။ အလုပ်အကိုင်တွေ အရမ်း အဆင်မပြေတွေ ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ခြေ လူတန်း စားတွေမှာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အစစက အဆင် မပြေဘူး။ အဆင်မပြေတဲ့ အတွက် သူတို့မှာ စားဝတ်နေရေး အတွက် နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ဖြေရှင်းနေရတဲ့ အခက် အခဲတွေ ရှိတယ်။”
ဒါပေမဲ့လည်း NLD အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာပဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ သယံဇာတတူးဖော် ထုတ်လုပ်မှုလို လုပ်ငန်းတွေမှာ အလွန်အကျွံ လုပ်ကိုင်နေ တာတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစား တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း တာဝန်ယူမှု ပိုရှိတဲ့ NLD အစိုးရ သက်တမ်း ပထမ ၆ လ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ အပေါ်မှာ အားရ တယ်လို့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင် ကိုအောင်ရဲကျော်က ပြောပါတယ်။
“ဒီအစိုးရပိုင်းမှာ ဘယ်လိုပြောမလဲ တာဝန် ယူမှုတွေ ဒီကတိပေး ပြီးတော့မှ လုပ်ဆောင် မှုတွေက အရင်ထက် စာရင်တော့ အများကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာတယ်လို့ တော့ ထင်ပါတယ်။ စစခြင်းပြောင်းလဲတာ ၆ လဆိုတော့ဘာမှ ၆ နှစ် မဟုတ်သေး ဘူးလေ။
ဒါပေမယ့် တော်တော်လေးတော့ ပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့။ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များတယ်ပေါ့ အဲဒီအတွက်လည်း အားရတယ် နောက်ပြီးရှေ့လျောက်လည်း ဒီလိုမျိုး ထပ်ပြီးတော့မှ ဆက်သွားရင်ကောင်းတာပေါ့နော်။”
NLD အစိုးရအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လ သက်တမ်းအတွင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိခဲ့သလို၊ ရှေ့မှာလည်း စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေတုန်းပဲလို့ မြင် သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေး လေ့လာသူ ဒေါက်တာ ရန်မျိုးသိမ်း ကတော့ အစိုးရ သက်တမ်း ၆ လအတွင်း အားနည်းချက်တွေကို အခုလို ထောက်ပြ ပါတယ်။
“လက်ရှိ အစိုးရ သစ်ရဲ့ ၆လပြည့်တော့မယ့် သက်တမ်း အတွင်းမှာ ဆောင်ရွက် ချက်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အားရကျေနပ်စရာ သိပ်မရှိဘူး လို့တော့ ကျနော်မြင်တယ်။
အထူးသဖြင့်ပေါ့လေ အစိုးရသစ် အနေနဲ့ ဒီ ၆ လ သက်တမ်း အတွင်းမှာ ၀န်ကြီးဌာန အားလုံးပြည်ထောင်စု အဆင့် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးရဲ့ ဆောင်ရွက် ချက်တွေကို အားနည်းချက် အားသာချက် ၊လိုအပ်ချက်၊ ချို့ယွင်းချက် တွေကို စနစ်တကျ ပြန်သုံးသပ် ပြီးတော့ စနစ်တကျ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ လိုအပ် တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
လက်ရှိအစိုးရသစ်ရဲ့ ၆ လ သက်တမ်းအတွင်းမှာ အဂတိလိုက်စားမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်တာကို မတွေ့ရဘူး။ အဲဒီအပြင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုလည်း အသစ်ပြင်ဖွဲ့စည်းတာမျိုးမတွေ့ရဘူး။ အဲဒီအခါကျတော့ အဲဒီအပိုင်းဟာ အင်မတန်မှ အားနည်းတယ် လို့ မြင်ပါတယ်။”
NLD အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံလို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေလို
ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ၊ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကြား ပြဿနာတွေ ပေါ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဖြေရှင်းဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်တဲ့ ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ ထူးခြားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အဖြစ်နဲ့လည်း မြင်ကြပါတယ်။
ဒီလိုပဲ မကြာသေးခင်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ဖယ်ရှားဖို့ အမေရိကန်က ကြေညာခဲ့တာ၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ တက်ရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာက နားလည်အောင် ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့တာတွေဟာလည်း အောင်မြင်မှုတွေအဖြစ်နဲ့ အများက ယူဆထားကြပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by : (မြင့်မြင့်ခိုင်)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, September 30, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ မြန်မာရေးရာ, လူထုအသံ, အသံဖိုင်
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ်အရေး ဒေသခံတွေ ဒီလို မြင်ကြတယ်
စစ်တွေ၊ မတ် ၂၈ ရက်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ မဲအများဆုံး အနိုင် ရရှိခဲ့တဲ့ ရခိုင် အမျိုးသား ပါတီက ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ် နေရာကို စွန့်လွှတ် ခဲ့ရပြီး တဲ့နောက်မှာ ရခိုင်ပြည်သူ လူထုတွေရဲ့ သဘောထား ဘာတွေ ရှိနိုင်မလဲ၊ ဘာတွေ မျှော်လင့်နေ ကြတာလဲ ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဇ္ဈိမက အလွှာစုံ ပြည်သူ လူထုတွေကို ဆက်သွယ် မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။
မောင်တင်ဦး (စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး)
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ်ကို ရခိုင် ပါတီက ရခိုင် အမျိုးသားကပဲ ဖြစ်စေ ချင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း၊ နောက်ပြီးတော့ ရခိုင်လူမျိုးက ၀န်ကြီးချူပ် ဖြစ်လို့ ရှိရင် အစစအ ရာရာပေါ့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးက အစ၊ လူမျိုးရေး ကိစ္စတွေက အစ သူ လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
တခြားသော ပါတီက ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သိတဲ့ အတိုင်းပဲ အရင်တုန်း ကလည်း ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာက ပါတီတွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အမျိုးသား ပါတီက ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ကောင်းမယ် လို့တော့ ထင်ပါတယ်။
ဇော်လင်းဦး (လင်းစာပေဆိုင် - စစ်တွေမြို့)
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ်ကို ရခိုင် ပါတီထဲက ဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်း တာပေါ့။ မဖြစ်ခဲ့တော့ဘူး ဆိုရင်လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင် ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို အမှန် တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် သူကို ပိုပြီးတော့ ဖြစ်စေချ င်တာပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ်နေရာကို ရတယ်၊ မရဘူး ဆိုတာက အဓိက မကျဘူး။ ကျမတို့ရဲ့ တကယ် အဓိကကျတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကတော့ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာပေါ့နော် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အရ ကျမတို့ ပြည်သူ လူထုတွေရဲ့ ချွတ်ခြုံ ကျနေတဲ့ ဘ၀တွေ ဘယ်လိုမြင့်တက် လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကပဲ အဓိက ကျလိမ့်မယ်လို့ ကျမ ယူဆတယ်။
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချူပ် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ပါတီကပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်လာပါစေ။ ခုလောလောဆယ် ကျမတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ၀န်ကြီးချူပ် ဦးညီပုပေါ့နော်။
အရင်ဦးဆုံး တောင်းဆို ချင်တာကတော့ ကျမတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်က သိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်က တအားလည်းပဲ ချွတ်ခြုံ ကျနေတယ်။
နောက်ပြီး ပြည်သူလူထုတွေ အားလုံးနီးပါးပဲ ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။ ပြည်ပကို ထွက်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်မှုတွေ မြင့်တက်လာတော့ ပြည်နယ်အတွင်းမှာ လူသား အရင်းအမြစ် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကလည်း မြင့်တက် လာတယ်။
ဒီလို ဆုံးရှုံးမှုဒဏ်တွေ အကုန်လုံး အဆုံးသတ်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်။ ပြီးရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့။ ဒါကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ ဆိုတာက စပြီး လုပ်စေချင်ပါတယ်။
ကျမတို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချူပ်ကို ရခိုင်အမျိုးသားကပဲ ရစေချင်ပါတယ်။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် NLD က ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချူပ် ဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ရခိုင်လူမျိုးဆိုတော့ ဘာပြောပြော သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်နယ်တွင်း မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရထားတဲ့ ANP က ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပေါ့။
ဦးကျော်လှအောင် (ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူ/နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း)
ကျနော်တို့ ပြည်နယ်က နစ်နာနေတာ ကြာပြီ။ ဒါကြောင့် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ လုပ်စေ ချင်ပါတယ်။ ဒါမှပဲ ပြည်နယ်ရဲ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကို ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်နိုင် လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အသစ်တက်လာမယ့် ၀န်ကြီးချူပ်အနေနဲ့ အဓိက ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို စတင်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ လူမျိုးရေး ခွဲခြားဖိနှိပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဥပဒေအတိုင်းပဲ လုပ်ဆောင်ရမယ်။ ဒါတွေကို မှန်ကန်စွာ လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ပြည်နယ်တိုးတက်ဖို့ လမ်းကြောင်းတွေ အများကြီး ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ခွဲခြား ဆက်ဆံ မှုတွေကို ယခင် အစိုးရလိုမျိုး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင် ဒီပြည်နယ်ဟာ တိုးတက်ဖို့ လမ်းစ မမြင်ပါဘူး။
အဲဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူသူတွေ အားလုံးက ခွဲခြားမှုမရှိ ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်မှသာ ကျနော်တို့ ပြည်နယ် တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ၀န်ကြီးချူပ်သစ်ကို အကြံပြုလိုပါတယ်။
ဦးမောင်မောင် (၂၀၁၂ ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ် ဆူပူမှု ပဋိပက္ခ တိမ်းရှောင်ဒုက္ခသည်)
၀န်ကြီးချူပ် ဘယ်သူဆိုတာထက် ၀န်ကြီးချူပ် ဘာတွေလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကတော့ ဘယ်ပါတီကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စီးပွားရေး တစုံတရာ မြင့်တက်လာဖို့အတွက် ဘယ်သူကပဲ ၀န်ကြီးချူပ်ဖြစ်ဖြစ် အဲဒါတွေကို လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခု NLD က ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်မယ်ဆိုတော့ အယင်ကထက် ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဇော်ဇော် (ကျောင်းဆရာ - မူဆလင် ဒုက္ခသည်စခန်း/စစ်တွေ)
ဘယ်အစိုးရပဲ တက်တက် ဒီဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ပညာရေး လွတ်လပ်ဖို့ အတွက် လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကနေ စပြီးတော့ လက်ရှိ အချိန်ထိ လွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ကြားခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။
တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခွင့် မရခဲ့ကြပါဘူး။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးရင် နောက်ထပ် အဆင့်မြင့် ပညာရပ်တွေ သင်ဖို့ သူတို့ စိတ်ဝင်စားရာ ဘာသာရပ်ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ကြားခွင့်ကို ရစေချင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ နေ့သင်တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခွင့် လုံးဝ မရခဲ့ပါဘူး။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူတွေကို အဝေးသင်ပညာရပ်နဲ့ပဲ လေ့လာခွင့် ရခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီအစိုးရလက်ထက်ကနေစပြီး မူဆလင်တွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ကြားခွင့်ကို ပြန်လည်ရရှိလာဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
မဇ္ဈိမသတင်း by ကျော်မင်း (စစ်တွေ)
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/12866
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, March 28, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ လူထုအသံ, တွေ့ဆုံမေးမြန်ခြင်း
၀န်ကြီးဌာနများ ပေါင်းစည်း၊ လျှော့ချ၊ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည့် အပေါ် အမြင်များ
အန်အယ်လ်ဒီက ဖွဲ့မယ့် အစိုးရ ၀န်ကြီးဌာန ၂၁ ခု ရှိတယ်လို့ ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ဌာန နာမည်တွေနဲ့ အတူ လွှတ်တော် နာယကက ကြေညာ သွား ပါတယ်။
အရင် အစိုးရ လက်ထက် ၀န်ကြီးဌာန ၃၆ ခုရှိတဲ့ အနက် တချို့ကို ပေါင်းစည်း၊ တချို့ကို ဖျက်သိမ်း ခဲ့ပြီး ဌာန လျှော့ချ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အန်အယ်လ်ဒီ ပြောခွင့်ရသူ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ ပြောကြားချက် အရ အစိုးရ အသုံးစရိတ် လျှော့ချ လိုတာကြောင့် ၀န်ကြီး ဌာနတွေ လျှော့ချ မှာလို့ သိရ ပါတယ်။
၀န်ကြီးဌာနတွေ လျှော့ချ ဖွဲ့စည်း လိုက်တာကြောင့် အစိုးရ အသုံး စရိတ်တွေ လျော့ကျသွား နိုင်မလား၊ ပေါင်းစည်းမယ် ဆိုတဲ့ ဌာနက ၀န်ထမ်းတွေ ဘယ်လို စိတ်ခံစားချက် ရှိနေနိုင်မလဲ၊ နယ်ပယ် အသီးသီးက လူပုဂ္ဂိုလ် တချို့ရဲ့ အမြင်သဘောထား တွေကို စုစည်း တင်ဆက် ပေးပါမယ်။
ဦးအောင်သူငြိမ်း (မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သုတေသီ)
“အန်အယ်လ်ဒီက ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေး ကာလ ကြေညာ စာတမ်း ထုတ်ကတည်းက အစိုးရက ကျစ်လျစ် ရမယ်။ ထိရောက် ရမယ်ဆိုတဲ့ ဟာမျိုး ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာချက်နဲ့ အညီပဲ အခုလို တတ်နိုင် သမျှ ၀န်ကြီး ဌာနတွေ လျှော့ချတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရမှာ ၀န်ကြီးနဲ့ ဒုဝန်ကြီးပေါင်း ၉၉ ယောက်လောက် ရှိတယ်ခင်ဗျ။
အခု ၀န်ကြီး ဌာနတွေ လျှော့ချ လိုက်တော့ ဖြစ်နိုင် တာက ၀န်ကြီး လစာတွေ တ၀က်လောက် လျှော့ချ သွားနိုင်မယ့် အနေ အထားပေါ့၊ အဆောင် အယောင်တွေ ပေးရတဲ့ ကိစ္စတွေ လျော့သွား နိုင်ပါတယ်။
တဘက်မှာ ကျတော့လည်း ၀န်ထမ်းတွေမှာ စိုးရိမ် စရာ စိတ်ပူ စရာတွေ ရှိလာ ပါတယ်။ အခု ဘဏ္ဍာနဲ့ စီမံကိန်းဌာနကို ပေါင်းပစ် လိုက်တယ်၊ ပေါင်းလိုက်တော့ ပြည်နယ်တွေမှာ ဆိုရင် ရုံးက ၂ ရုံး ၂ ရုံးစီ ရှိတဲ့ အခါကျတော့ ဘယ်လို ပြန်ပေါင်း မလဲပေါ့နော်။
ကျနော့်အမြင် ပြောရရင်တော့ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်သလို အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ၀န်ကြီးဌာန ဆိုတာတောင် ရှိပါတယ်၊ Admin Reform Ministery ဆိုတာမျိုးပေါ့၊ အခု အန်အယ်လ်ဒီ မှာတော့ အဲ့ဒါမျိုး မတွေ့ ရဘူးဗျ။”
ဦးဖေသန်း (မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)
“အစိုးရ အသုံးစရိတ် လျှော့ချတယ် ဆိုတာကတော့ အနည်း အကျဉ်းတော့ ပါမှာပေါ့။ ၀န်ကြီးတွေ လျော့သွား တာလည်း ပါကောင်း ပါမယ်၊ ပြီးတော့ ဦးစီး ဌာနတွေ တဆက် တစပ်တည်း ပေါင်းပြီး လုပ်ရတဲ့ အတွက်လည်း ဒီ့ပြင် အသုံး စရိတ်တွေ လျော့ကျကောင်း လျော့ကျ နိုင်တာပေါ့။
အသုံးစရိတ်ကို အတော် အသင့်တော့ လျှော့ချနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တဘက်က စိုးရိမ်တာ ကတော့ ၀န်ကြီးဌာန နည်းသွားတဲ့ အပေါ်မှာ လုပ်နိုင် ကိုင်နိုင် လက်လှမ်းမှီ နိုင်တော့ ရှိပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးစီးဌာနတွေ များလာတော့ အဲ့ဒီထဲမှာ အံဝင် ခွင်ကျ ဦးစီးဌာနတွေ ပေါ်လာဖို့ လိုတယ်။
ဦးစီးဌာနတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ လျော့ကျ သွားမလား၊ ဘတ်ဂျက် ခွဲဝေမှုတွေ လျော့ကျ သွားမလား၊ ၀န်ထမ်းတွေ ဟိုရောက် ဒီရောက် ဖြစ်ကုန် မလား၊ ဖြစ်တဲ့ထဲမှာ ဘယ်လို ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာ မလဲပေါ့ အဲ့ဒါတွေလည်း စိုးပါတယ်။
တဘက်က ၀န်ကြီး တယောက်ထဲက ဦးစီးဌာနတွေ အများကြီး ကိုင်ထားရတဲ့ အခါ စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းမှာ အားနည်း လာနိုင်မလား၊ အမျိုးမျိုး ပေါ့လေ။ ဒီကိစ္စ အန်အယ်လ်ဒီ ဒီအားနည်းချက်တွေ အပေါ် အစီအစဉ်တွေ ရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
ဦးသုဝေ (ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မြန်မာ-ဥက္ကဋ္ဌ)
“၀န်ကြီးဌာန လျော့နည်းတော့ ၀န်ကြီးအရေ အတွက် လျော့သွား မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကတော့ လျော့မသွား ဘူးပေါ့နော်၊ များများကြီး လျော့သွား ဖို့တော့ မရှိပါဘူး၊
သို့သော် ၀န်ကြီး လစာ ပေးရ တာတော့ လျော့သွား မှာပေါ့။ ဒီလို ၀န်ကြီး ဌာနတွေ ခွဲတယ်၊ ၀န်ကြီး အရေ အတွက်တွေ ခွဲတယ် ဆိုတာတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ပါတီရဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ လုပ်တာပေါ့၊ ပါတီရဲ့ ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်တာကို ကျနော်တို့က ဘာမှ ပြောလို့ မရဘူး။
သူကတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ယူဆပြီးတော့ လုပ်မှာ ပဲလေ၊ အစိုးရ ထဲမှာလည်း ကွာတာပေါ့၊
ဥပမာ ဖဆပလ အစိုးရ ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးတွေက သူ့ရဲ့ အရည် အချင်းအရ သူ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့် အ၀ ရှိတယ်။ မဆလ ခေတ်မှာ ကတော့ အစိုးရ ပုံစံကိုက အထက်က ညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်း လုပ်ရတယ် ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ ပုံစံချင်း မတူ ကြဘူးလေ၊
အန်အယ်လ်ဒီ ထဲမှာလည်း အရည် အချင်းရှိတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်၊ သူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ အခြေအနေ မရှိသေးဘူးဗျ။”
သိပံ္ပနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ ကထိက ဆရာမတဦး
“သပန ၁၉၉၆ မှာဖွဲ့တယ် ၊ ၉၇ မှာ အလုပ် ဝင်တယ် ပညာရေးက master ဘွဲ့ရ ခဲ့တယ် ဌာနမှာ weight အများဆုံး ဦးစီးက စက်မှုနဲ့ သက်မွေးပညာ ဦးစီးဌာနပါ။
အဓိကကတော့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်သိပ္ပံ စက်မှု အထက်တန်း ကျောင်းတွေကို စီမံ ကွပ်ကဲတာပါ။ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အောက်ကို ပေါင်းလို့ ရပါတယ်၊ ကိုယ်မင်း ကိုယ်ချင်းမို့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရာထူးတိုး အပြောင်းအရွှေ့ နှစ်တိုး စတာတွေက မူမရှိပါဘူး။
ပညာရေးနဲ့ လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝ တူပေမယ့် အခွင့်အရေး ချင်းက မတူညီပါဘူး။ သင်ကြား စီမံကိစ္စတွေ ကလည်း စနစ်တကျ မရှိပါလှ ပါဘူး။ ပညာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စ အားလုံးကို လူတဦးတည်း မူတမျိုးတည်း ကသာ စီမံ ခန့်ခွဲပါက ရည်းမှန်းချက်များ ပေါက်မြောက် အောင်မြင်နိုင် မည်ဟု ယူဆမိ ပါကြောင်း။”
“အသုံး စရိတ်ပိုင်း တခုတည်း နဲ့တော့ မပြောသင့် ဘူးပေါ့။ ၀န်နဲ့အား မျှအောင် လုပ်ရမှာပေါ့၊ အရင်တုန်း ကတော့ ၀န်ကြီးတွေ များတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ခရီးထွက်ရင်လည်း အသိုင်း အ၀ိုင်းတွေ အများကြီးနဲ့ ခရီးထွက် ကြရတယ်။
အဲ့ဒီမှာ အသုံးစရိတ် ပိုတာတွေ ရှိတယ်။
ဥပမာ ဟယ်လီကော့ပတာနဲ့ ၀န်ကြီးတွေ ပြိုင်ပြီး ခရီးထွက်ခဲ့ ကြဖူးတယ်။ အဲ့ဒီဟယ်လီကော့ပတာ ဆိုတာက မြေကြီးကနေ မကြွခင် စက်နှိုး လိုက်တာနဲ့ စက်ကို ခလုတ်နှိပ် လိုက်ရင် ကျပ်ငွေ ၂၀၀၀၀ ထွက်ပါ တယ်တဲ့၊
မြေကြီးကနေ ၁ ပေထွက် လိုက်တာနဲ့ ကျပ်ငွေ ၂၀၀၀၀၀ ထွက်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးတွေ ရှိတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ဟယ်လီကော့ပတာကြီးတစီးနဲ့ ၀န်ကြီးတွေ အပြိုင် အရင်တုန်း ကတော့ လျှောက်သွား ခဲ့ကြဖူးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ၀န်ကြီးနည်း သွားရင်တော့ အဲ့ဒီလို လျှောက်သွားတဲ့ အသုံးစရိတ် လျော့သွားနိုင် ပါတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။”
ဒီဗွီဘီ by ရွှေအောင်
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/139967
ကဏ္ဍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း, လူထုအသံ
ဒုသမ္မတ အဖြစ် ရွေးခံရသူ ဦးမြင့်ဆွေ စစ်တပ် ထောက်ခံမှု ကိုသာ အဓိက ရရှိ
ရန်ကုန် (Myanmar Now) –
သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတ နေရာတွေ အတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ထောက်ခံ၊ သြဘာပေးသူ အများအပြား ရှိနေပေမယ့် တပ်မတော် လမ်းကြောင်း ကနေ လာပြီး အင်္ဂါနေ့မှာ ဒုသမ္မတ အဖြစ်ရွေးခံ ရသူ ဦးမြင့်ဆွေကိုတော့ ထောက်ခံ အားပေးသူ အနည်း အကျဉ်းသာ ရှိနေပါတယ်။
အခြေခံ ဥပဒေပါ အခွင့်အရေး အရ ဒုသမ္မတ တစ်ဦးကို တပ်မတော်က စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ရာမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ဆဲ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ အရပ်ဘက် ရောက်နေတဲ့ စစ်အရာရှိ ဟောင်းတွေ အများ အပြားကို ကျော်ပြီးသဘောထား တင်းမာသူ အဖြစ် အများက ယူဆကြတဲ့ ဦးမြင့်ဆွေကို ရွေးချယ် ခဲ့တာပါ။
ဦးမြင့်ဆွေကို ဒုသမ္မတ နေရာမှာ ထားဖို့ တပ်မတော်က စီစဉ်တာ ဒါဟာ ပထမဆုံး အကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂ဝ၁၂ မှာ ကျန်းမာရေး ကိစ္စနဲ့ အနားယူမယ့် ဒုသမ္မတ တစ်ဦးဖြစ်သူ သီဟ သူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးရဲ့ နေရာမှာ သူ့ကို အစားထိုးဖို့ တပ်မတော် ဘက်က စီစဉ် ခဲ့ပေမယ့် အဲ့ဒီ အချိန်ကသူ့ရဲ့သားမက်ဖြစ် သူဟာ သြစတြေးလျ နိုင်ငံသား ခံယူထားသူဖြစ်တဲ့ အတွက် အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ပါ ဒုသမ္မတ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ငြိစွန်းနေ တာကြောင့် အစီအစဉ် ပျက်ခဲ့ ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း အတွင်းတပ်မတော်က သူ့ကို ဒုသမ္မတလောင်း အဖြစ် ရွေးချယ် တင်သွင်း ရာမှာတော့ NLD ကြီးစိုးတဲ့ သမ္မတ အရည်အချင်း စိစစ်တဲ့ အဖွဲ့က ဒီတင်သွင်းမှုကို ကန့်ကွက်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဦးမြင့်ဆွေဟာ တပ်မတော် ကနေ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဆင့်အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီး ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲက တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် ခန့်အပ်ခံ ရပါတယ်။
၂ဝ၁၅ လဆန်းပိုင်း ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမရှေ့ဆန္ဒပြမှုကို လက်ပတ်နီဝတ် စွမ်းအားရှင်တွေ အသုံးပြုပြီးကိုင်တွယ် ခဲ့တာဟာ ဥပဒေနဲ့ အညီလုပ်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အတွက် အပြင်းအထန် ဝေဖန် ခံရသူပါ။
ရန်ကုန်ဟာ သူ့အတွက်တော့ အစိမ်းသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်အစိုးရခေတ် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မှာ သံဃာများ ဆန္ဒပြမှုကို အကြမ်းဖက် ဖြေရှင်း ရာမှာဦးမြင့်ဆွေက ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ တိုင်းမှူး တာဝန် ယူထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
၂ဝ၁၃ နှစ်ကုန်ပိုင်း 7Day သတင်းဂျာနယ်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် မှာတော့ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေး အခင်းကို ကိုင်တွယ်ခြင်းဟာ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်၊ ဒီတာဝန်ယူမှု အတွက် သေဒဏ် ပေးရင်လည်း ခံနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ ဖူးပါတယ်။
ဦးမြင့်ဆွေ ဒုသမ္မတလောင်း အဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်း ခံရတော့မယ် အချိန်မှာပဲ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ ပစ်မှတ်ထား ပိတ်ဆို့ခံ ထားရသူများ စာရင်းမှာ သူ့အမည် ပါဝင်ဆဲ ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုပိတ်ဆို့ခံရသူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ခရီးသွားလာခွင့် မရှိသလို အမေရိကန်နိုင်ငံ သားတွေ ကိုလည်းဒီစာရင်းထဲ ပါဝင်သူတွေနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံခွင့် ကန့်သတ် ထားပါတယ်။
ဦးမြင့်ဆွေ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့ လမ်းကြောင်း ကနေသမ္မတလောင်း ဖြစ်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက ကြိုဆိုခြင်း မရှိပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်းကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထောက်ခံ အားပေးပေမယ့် လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မတော်က ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ရောက် နေရာယူခွင့်၊ စစ်တပ်က သမ္မတလောင်း တစ်ဦး အတွက် အမည် တင်သွင်းခွင့်တွေ ပြုထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ နိုင်ငံခြားရေး ဌာနပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်John Kirby က ပြောပါတယ်။
“ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို သူတို့ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို သမ္မတလောင်းတွေ ရွေးချယ်တဲ့ စနစ်ကို မကြိုက်ပါဘူး။ ဒုတိယသမ္မတလောင်း အဆိုပြုတဲ့အဆင့်ဟာ အရေးကြီးပါတယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သမ္မတရွေးချယ် စိစစ်ရေး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘမျိုးသိန်းကတော့ “(ဦးမြင့်ဆွေကို) တပ်ကနေ ရွေးချယ်လိုက်တာက စစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်လို့ ယူဆရတယ်”လို့ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ညိုညိုသင်းက ဦးမြင့်ဆွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေး အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ပေမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကာလမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ လာဘ်ပေးလာလ်ယူ ပပျောက်ရေး၊ ဆင်းရဲ့နွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး စံနှုန်းတွေနဲ့ ကြည့်ရင် အားရစရာ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သက်တမ်း အတွင်းမှာတော့ တပ်မတော် အပေါ်မှာ သစ္စာရှိသူ ဆိုတာပေါ်လွင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ တပ်မတော်သား အစုအဖွဲ့ကသစ္စာရှိသူကို ဦးစားပေးရွေးတာ။ NLD ဘက်က သမ္မတရွေးတာလည်း သစ္စာရှိသူကိုပဲ အခြေခံပြီးရွေးတာပဲလေ” လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ဖော်ဆောင်မယ့် NLD အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းမှာ ဦးမြင့်ဆွေကြောင့် ပွတ်တိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ ယူဆကြောင်း ဒေါ်ညိုညိုသင်းက ပြောပါတယ်။
ဒုသမ္မတနေရာ အတွက် ဦးမြင့်ဆွေထက် ပိုမိုသင့်တော်သူတွေ တပ်မတော်ထဲမှာ အများအပြားရှိတဲ့ အတွက် ဒီရွေးချယ်မှုကို အံ့အားသင့် မိတယ်၊ မျိုးဆက်သစ် စစ်အရာရှိတွေကို နေရာပေးသင့်ပြီလို့ ရန်ကုန် အခြေစိုက်နိုင်ငံရေး အကဲခတ် ဦးခင်ဇော်ဝင်းက သုံးသပ်ပါတယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ ဦးလှဌေးဝင်း ကတော့ တပ်မတော် အစုအဖွဲ့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“သင့်တော်ပါတယ်။ သူဟာ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့သူပါ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဦးမြင့်ဆွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေရဲ့ အနီးကပ် လက်ရုံးတစ်ဆူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပေါ် ဦးသန်းရွှေရဲ့ သြဇာရှိနိုင် သေးတယ်လို့ ယူဆနေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေရဲ့ သြဇာဟာ တပ်ဘက်ပိုင်းမှာ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာတော့ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ သူရဲ့ သြဇာက ရှိသင့် သလောက်တော့ ရှိဦးမှာပဲ” လို့နိုင်ငံရေး လေ့လာသူ စာရေးဆရာ ဦးကျော်ဝင်းက ဆိုပါတယ်။
မန္တလေးက ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဦးသောဘိတ ကလည်း တပ်မတော်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ဒေါသကို ဆွပေးသလို ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မိန့်ပါတယ်။
“ဦးမြင့်ဆွေက ဦးသန်းရွှေရဲ့ လူယုံကြီး ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်လည်း နောက်ဆုံးတော့ ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာ ဦးသန်းရွှေကြီး အုပ်ချုပ်နေ ပါလားဆိုတဲ့ အတွေးကို ရသွားစေတယ်၊ ငါတို့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်တယ်ကွာ ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ပြသွားတာလို့ သုံးသပ်တယ်”လို့ မိန့်ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သမ္မတရွေးပွဲမှာ ဦးမြင့်ဆွေက တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ မဟာမိတ် ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ မဲတွေ သေချာပေါက် ရမယ်လို့ အများက ယူဆပါတယ်။ ဦးထင်ကျော်က မဲအရေအတွက် ၃၆ဝ၊ ဦးမြင့်ဆွေက၂၁၃၊ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ၇၉ရရှိကြ ပါတယ်။
သမ္မတရွေးပွဲမှာ မဲအများဆုံး မရရှိရင်လည်း ဒုတိယ မဲအများဆုံးရဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
သမ္မတရာထူး သက်တမ်း မကုန်ဆုံးခင် နုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော် သမ္မတရာထူး နေရာလစ်လပ် သွားတဲ့ အခါ သမ္မတရွေးပွဲမှာ ဒုတိယ မဲအများဆုံး ရသူက ယာယီသမ္မတ အဖြစ် တာဝန်ယူ ရမယ်လို့ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်း ထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒုသမ္မတဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး ပါ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာလည်းတာဝန် ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
မဇ္ဈိမသတင်း by ထက်ခေါင်လင်း/Myanmar Now
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/12362
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 16, 2016 No comments: